Ogaden News Agency (ONA) – Muuqaalkii Naftii Hure ee Kabaxay Ilays TV & Qalinka Wariyaha
Muuqaalkii Naftii Hure ee Kabaxay Ilays TV & Qalinka Wariyaha
Posted by ONA Admin	/ March 3, 2015
Halkan ka daawo filim xiiso leh oo laga sameeyay ciidanka Wadaniga Xoreynta Ogaden, Muuqaaladan oo kamida Barnaamijka Naftii Hure oo kamida Barnaamijyada Ilays TV.
Muuqaalkan waxaa lagu soo qaatay filimaan muujinaya Arrimaha Bulshada gaar ahaan caruur aad u da’yar oo baranaysa quraanka. Hadaba Barnaamijkan ayaa tilmaam gooni ah oo aad u muhiima ka bixinaya dhibaatada waxbarasho ee ka jirta dhulka Ogaden.
Shacabka Somaliyeed ee dhulka Ogaden 80% waaa bulsho ku nool baadiyaha oo ree guuraa ah, caruurtaasna waxaa gumeysigu kala daggaalama waxbarashada kaliya ee ay helikaraan oo ah Barashada Quraanka iyo Culuumta Diinta Islaamka. Filimkan ayaa lagu soo saaray Macalimiin Quraan oo laga ceydhiiyay goobihii ay Quraanka ku dhigi jireen. Waxayna sheegeen inay rabaan wadanka inay ka baxaan iyaga oo ka dalbaday Jabhada ONLF inay tilmaamaan kaalmana ka siiyaan sidii wadanka ay uga haajiri lahaayeen.
Barnaamijkan Naftii Hure qodobada kale ee xiisaha lahaa ee lagu soo qaatay waxaa kamida Gudoomiyaha Xarunta dhexe ee JWXO Cabdikariim Sheekh Muuse oo la hadlaya Ciidanka JWXO. Naftii hure Cabdi Kariim Sheekh Muuse waxa uu ka hadlayaa dhibaatooyinka xaalufinta dhirta iyo daaqu leedahay iyo sidii loo maamuli lahaa loogana hortagi lahaa. Sidoo kale gudoomiyaha ayaa hadalo guubaabo ah oo ku aadan gumeysiga usoo jeedinaya Ciidamada JWXO.
Muuqaaladan lagu soo qaatay Ilays TV, waxay xanbaarsanaayeen oo xiiso dheeraada watay Nolosha ree Guuraaga Somalida Ogadeniya. Waxaana filimadan si quruxbadan uga muuqday
Aqal Somali Cusub oo loo dhisay reer Cusub oo Aroos ah
Gabadh soomaliyeed oo dhabarka ku xanbaarsan Haan
Allaabaha lagu dhisto guryaha, ama ardaaga lagu fadhisto.
Wiilal Geel Jira oo wata Gaawe, Gudin iyo waxyaalaha aasaasiga u ah Raacitaanka geela
Geel aad u qurux badan oo kasoo fulay Ceelasha Caanka ah ee dhulka Ogadeniya
Iyo Muqaale kale oo xiiso leh.
Hadaaba Kobtan ka daawo filimkaas, Hana illaawin inaad ku biirto Bogga Youtubeka ilays TV oo aas saxeexdo Qeybta Subscribtionka